Akhriso :- 6 Arrimood Oo Ragga Looga Baahan Yahay In Ay Ka Fekeraan Ka Hor Inta Aanay Guursan Xaas Labaad | Berberatoday.com
Akhriso :- 6 Arrimood Oo Ragga Looga Baahan Yahay In Ay Ka Fekeraan Ka Hor Inta Aanay Guursan Xaas Labaad
Hargeysa(Berberatoday.com)-Rag badan waxa culays weyn ku haya waxa ay samayn lahaayeen marka ay ku dhalato hawada ah in ay samaystaan xaas labaad (Min yaraystaan). Cilmi baadhis dhawaan la sameeyay ayaa dhiiri galisay in ragga awood dhaqaale lihi in loo baahan yahay in ay min yaraystaan oo guursadaan xaasas badan, inkastoo qaar kamid ah ragga ay u dhaqmaan qaab ciyaal suuqnimo ah oo aan ku habboonayn masuuliyad marka ay doonayaan in ay xaasas kale samaystaan.
Qormadan kooban waxa aan ku eegi doonaa dhawr waxyaabood oo loo baahanyahay inaad ka fekartid ka hor inta aanad guursan xaasas badan. Waxaanan ku soo ururin doonaa Lixdan qodob:
Ugu Horrayn Fahan Naftaada
Marka ugu horraysa ma tahay nin awooda laba xaas? Awood ma u leedahay inaad taageerto labada xaas ama aad ka baxdid xaqooda iyo xaqqa caruurta ay kuu dhalaan?
Ka Feker Dareenka Dareenka Xaaskaaga Hore
Guursashada xaas labaad oo aanad kala hadlin xaaskaaga 1-aad waxay dhalisaa culays weyn oo dhinaca nafsiga ah. Hinaase weyn ayuu dhaliyaa oo qoyskaaga burburin kara sidaa darteed waxa loo baahan yahay in aad xaaskaaga hore marnaba ka qarin oo u sheegto. Haddii sida rag badan aad yeesho oo aad qariso waxa ay u xun tahay uun adiga iyo iyada balse warka cad iyo runtu waa mid wax badan kaa dejin karta culayska. U sheeg xaaskaaga in ay tanaasusho si kasta oo ay u masayrto u sheeg in tani tahay xaqiiqo sharci ah oo aanay meerna uga baxsan Karin kuna sabirto. Waxa la ogaaday haween badan oo raggoodu u sheegeen xaqiiqadan in ay qaboobeen oo ku adkaysteen in ay qoysaskooda haystaan.
Noqo Mid Diyaarsan Ama Isku Dubaridan
Haddii ay xaaskaagu kaa ogolaato qorshaha aad ku guursanayso gabadh kale waa inaad keentaa qaab loo wada noolaado, Miyey meelo kala duwan ku noolaanayaan? haddii ay haa tahay waa inaad ku filnaataa waxyaabaha ay u baahan yihiin xaasaskaagu, maxaa yeelay qofka kaliya ee ay heystaan waa adiga sidoo kale xaaskaaga labaad waa inaad mudnaan siisaa iyadana oo aad hab caddaalad ah u dhaqataa.
Haku ciyaarin, la soco xaaladdooda una noqo qof u furfuran oo la xidhiidha mar walba. Samayso jadwal sharciga islaamka ku cad oo ah in haweenay kastaaba leedahay habeenkeeda. Ubadku hakuu sinnaadaan haweeenkana xaq isku mid ah sii adiga oo aan midna u eexanayn.
Xaaska hore iyo ta dambe toona marna midna ha khiyaamayn. Ku dadaal in aad mid kasta xaqeeda ka soo baxdo. Waxa la ogaaday rag badan oo xaasaskooda u caddaalad sameeyey in ay galeen nolol macaan oo mid kastaaba ku dadaashay in ay soo jiidato oo saygeeda is jeclaysiiso. Ku nool nolol xaqiiqo ah adiga oo mid walba u muujinaya doorkeeda oo aan khiyaamo ku jirin.
Daryeel Iyo Ilaalin
Xaqiiji in xaaskaaga iyo caruurtaada aad ilaalisid isla markaana aad la socotid waxa ay ku sugan yihiin, waana in mid kamid ah xaasaskaagu aanay dareemin in midda kale looga eexday si dhex dhexaad ah ugu cadaalad fal. Daryeel iyo ilaalin hakaa helaan.